सानी छोरीसंग खेलेर बाइ बाई छोरी भन्दै हिँडेका सरोज, त्यसपछि घर फर्कन पाएनन् , (हेर्नुस् ) – Patrika Nepal
शनिबार , माघ ८, २०७८
सानी छोरीसंग खेलेर बाइ बाई छोरी भन्दै हिँडेका सरोज, त्यसपछि घर फर्कन पाएनन् , (हेर्नुस् )
पुष ३०, २०७८ शुक्रबार 28
नेपाली सेनाको कालीबहादुर गण चितवनबाट करिब अढाइ वर्षअघि नै १००७९२ नम्बरको एसएमजी ग’न हरायो । सो गन चोरी गरेको आरोपमा प’क्रा’उ परे नेपाली सेनाका सिपाही सरोज र अमल्दार लबकुमार गुरुङ । उनीहरूलाई सैनिक हिरासतमा चार महिनाको या’तना’पछि पुर्पक्षका लागि का’रा’गार चलान गरिए पछि अहिले चितवन कारा’गार’मै छन् ।
तर चार महिना ठूलो या’त’ना र वर्षैको जेल बसाई पछि उनीहरु निर्दोश रहेको पु’ष्टि भएको छ । सो ग’न अर्कैले चोरेको पाइएको हो । आफ्ना श्रीमान करिब अढाइ वर्ष जेलमा हुँदा र सेनाको हिरासतमा या’त’ना सहेको थाहा पाउँदा श्रीमतीको मन छि’याछि’या हुन्थ्यो ।
तीन महिना मात्र भएकी सानी छोरीसंग खेलेर बा’इ बाई छोरी भन्दै हिँडेका सरोज तामाङ त्यसपछि घर फर्कन पाएनन् । ०७५ पुस १ गते अन्तिम प’टक घरवाट हिँडेका थिए।
झुटो आरोपमा प’क्रा’उ परेका उनीहरुले चार महिना सै’निक हि’रा’सतमा बिताएको या’त’ना थाहा पाएर आमाबुवाको मन कहालिएको छ । सरोजले आफुले पाएको या’त’ना सम्झदै भने, एकपटक त हामीलाई आँखामा प’ट्टी, हातमा ह’तक’डी लगाएर जंगलमा ल’गियो।
फा’यरि’ङ गरियो। अनि भनियो– ‘तेरो साथी ल’ब’कुमार म’र्‍यो।’ त्यसपछि बन्दुक कहाँ छ, अब तँ भन्, नत्र तलाई पनि मा’र्दि’न्छु भन्दै मलाई ध’म्क्या’इयो। त्यतिमात्रै होइन, तेरो श्रीमतीलाई दि’ल्ली लगेर बे’च्दि’न्छु, छोराछोरी बे’च्दि’न्छु, अनेक भनेर तर्साइयो।
यस्तो कुरा थाहा पाएपछि सानी काखको छोरी छोडेर जागिरमा जाने गरेकी उनकी श्रीमती उर्मिला अफिस जान छोडिन् । कतै आफुलाई लगेर बेचिदिने होकी भन्ने उनको मनमा त्रा’स रहन्थ्यो । तीन महिना हुँदा बुवाले छोडेकी छोरी अहिले ४ वर्षकी हुन लागिन् ।
छोरीले बाबा खै भन्दा उनले मन थाम्न सक्दिनन् । सुत्केरी अवस्थामा आराम गर्नुपर्ने र पोशिलो खानेकुरा खानुपर्ने बेलामा उर्मिला त्रासमा बस्नुपर्यो । सेनाको डरले भएको जागिर छोडेर घर भित्रै बस्नुपर्दा उनी कहालिइन् ।
Prevअत्यावश्यक अवस्थामा स्मार्ट लाइसेन्स चाहिएमा ७ दिनअघि निवेदन दिनुपर्ने
Nextमाघ ०१ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
पुष २२ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीलाई काम गर्ने समय बढाइदिन गृहमन्त्रीको आग्रह
पुष ०३ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
रात्रीबसको यात्रामा उ मेरो साथमा……त्यसपछि रातभर उ मेरो काधमा निदाई….
मन्त्रालयकै गाडी भित्र यौन क्रियाकलाप गर्ने3जना पक्राउ (5677)
किन गर्दैछन् त स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरु धनगढीमा MCC बिरुद्ध कार्यक्रम ? (878)
बिजय शाहि जिउँदै भेटिए (794)
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (657)
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको मुख्य द्वार प्रवेश गर्ने बित्तिकै खुशीले भक्कानीए तालिवान लडाकु ( भिडियाे सहित ) (521)
असुरक्षित अफगानिस्तानमा सुरक्षा प्रदान गर्दै नेपाली गार्ड (499)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (481)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (407)
यी ३ राशिका युवतीलाई कहिल्यै नगर्नुहोस् हेला, जिन्दगीभर हुनेछ पछुतो !
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित)
होसियार ! यी ५ खानाको बढी सेवनले निम्त्याउँछ क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग
१.	सुर्खेतबाट आयो दुख लाग्दो खबर – एकै परीवारका चार जनाको मृत्यु (114)
२.	श्रीमानले यौ’न प्या’स मे’टा’उँदा श्रीमतीको सं’बेदनशिल अ’ङ्गमा टो’कि’टो’की मा’रे(भिडियो हेर्नुस) (104)
३.	कुवेतमा क्रेनको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु । हार्दिक श्रद्धाञ्जली (95)
४.	छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसोभए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् (86)
५.	आफ्नै श्रीमतीलाई मालिकसंग कोठामा ना’ ङ्गै भेटेपछि(भिडियो (84)
६.	जाडो बढेका बेला बुटवलमा भएको यो अत्य’तै दु:खदायी घ’टना (83)
७.	२० वर्षसम्म हजुर-आमाको कवाडी भनेर बेवास्ता गरे,’एक दिन कपडा हटाएर हेर्दा… (77)
८.	यो महिनामा विवाह गर्दै अभिनेत्री रेखा थापा, को हुन् हुने वाला बेहुला ? (76)
© 2022 Patrika Nepal